Vaovao - Ahoana ny fametrahana harato fiompiana vorona araka ny tokony ho izy
Amin'izao fotoana izao, ny anti-birdnet dia vokatra ampiasaina matetika kokoa, ary ny fahombiazany dia tsara amin'ny lafiny samihafa. Ohatra, izy io dia manohitra ny fahanterana ary manana tanjaky ny tensile avo, fanoherana ny hafanana ary ny fanoherana ny rano. Satria ireo vokatra ireo dia ampiasaina amin'ny toerana samihafa, dia samy hafa ny karazany, ary raha nanontaniana momba ny fiompiana harato ny vorona, dia nihevitra ny rehetra fa nampiasaina tamin'ny fiompiana. Ity manaraka ity dia mamaritra ny fomba fametrahana harato fiompiana vorona.
Rehefa mametraka harato fanaraha-maso vorona ho an'ny fiompiana dia tsy maintsy sintonina ny tariby vy. Izany dia noho ny fiompiana miadana ny harato fanaraha-maso ny vorona, fandevenana andry → fisintonana tariby vy → fametrahana harato. Ny iray metatra, sodina vy, ary hazo dia azo ekena, ary tavoahangy plastika na lohan-damba no afatotra eo an-tampon'ny andry mba hisorohana ny fahasimban'ny harato vorona mpiompy. Ny tariby vy ho an'ny fiompiana harato fanaraha-maso vorona dia mila henjana amin'ny anoloana, aoriana, ankavia ary havanana, ary ny sisiny dia mila amboarina amin'ny diagonaly, ary azo ampiasaina ny tariby 200-300. Amin'ny ririnina, mila diovina ny anti-birdnet, izay afaka manitatra ny fiainan'ny anti-birdnet. Ny fomba fanangonana harato hiompy harato hisorohana ny vorona dia ny mamadika ny fomba fametrahanao azy. Tsarovy ny manangona harato vorona ho lava. Alohan'ny hanokafana ny harato fiompiana vorona, atsangano ny iray amin'ireo harato fiompiana vorona ary sintoniny eo amin'ny sisin'ny tariby vy izy rehetra, misintona avy eo afovoany mankany amin'ny tendrony roa. Mitsitsy fotoana izany ary mamela ny harato hiparitaka avy eo afovoany mankany amin'ny andaniny roa. Amboary fotsiny.
Raha fintinina, mila fahatakarana ny fomba fametrahana harato fiompiana vorona ny tsirairay. Manantena aho fa hanampy anao. Raha ny marina, tamin'ny voalohany dia tsy dia nampiasaina loatra ny vokatra nataon'ity karazana mpanamboatra harato vorona ity. Satria maro no tsy nahay nampiasa azy dia betsaka ny olona nampiasa azy tsikelikely ary fantatry ny rehetra. Raha ny marina, ity karazana vokatra ity dia tena tsara ary tena mora ampiasaina ka lasa malaza tsikelikely.